ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ “အလှည့်” နဲ့“အပြောင်း” (Tu Maung Nyo) | MoeMaKa Burmese News & Media
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးက သမဝါယမဝန်ကြီးဌာနကို စီမံကိုင်တွယ်နိုင်သလို၊ အလုပ်သမားဝန်ကြီးကလည်း ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီး ဌာနကိုထိန်းချုပ်ကွပ်ကဲနိုင်ပါတယ်။ ဒါကလည်းကျနော်တို့ဝန်ကြီးများရဲ့ပြိုင်စံမပေါ်တဲ့တတ်ပွန်လိမ်မာမှုတွေလို့ပြောရမှလား။ အထွေထွေ ကျွမ်းကျင်သူတွေလို့ပဲဆိုရမှာလား။ နိုင်ငံတကာကို ခေါင်းမော့ဝင့်ကြွားရမယ်အချက်များလား။
“ခရီးမတွင်တဲ့လူတွေ ကျနော်တို့အစိုးရအဖွဲ့ထဲမှာလည်းရှိပါတယ်၊ လွှတ်တော်ထဲမှာလည်းရှိပါတယ် — လေးလေးပင်ပင်နဲ့ လုပ်နေတဲ့သူတွေကတော့ နောက်ချန်ထားခဲ့ရမှာပဲ” လို့ ဦးသိန်းစိန်က ဗွီအိုအေနဲ့ဗျူးရာမှာပြောခဲ့ဖူးတယ်။ လေးလေးပင်ပင် လုပ်နေသူ တွေ က အစိုးရအဖွဲ့ထဲမှာ “လေးလေးပင်ပင်စာရင်းဝင်” ဘယ်နှယောက်ရှိသလဲ။ဘယ်သူတွေလဲ။
အဲဒီအထဲမှာ မြို့မေတ္တာခံယူမယ့်သား ဦးကျော်ဆန်း တစ်ယောက်ကိုတော့အထင်းသားမြင်သည်လို့ ဆိုရမှာပဲ။ သူဟာ အစိုးရ ပြောရေးဆိုခွင့်ရအာဏာပိုင်၊ ဝန်ကြီးဌာန ၂ ခုကိုကိုင်ထားသူဖြစ်ပါတယ်။ အခုတော့သူ့ကို သမဝါယမဝန်ကြီးဌာနသို့ “ပြောင်းလဲ” ပေး လိုက်တယ်။ အစိုးရအဖွဲ့ တန်းစီဇယားအမှတ်စဉ်အရ ဆိုရင် သူဟာယခင်က အမှတ်စဉ်(၈)။ အခုတော့ အမှတ်စဉ်(၁၈)နေရာ ရောက်သွားတယ်။ အစိုးရအဖွဲ့ တန်းစီဇယားအရဆိုရင် “အောက်ရောက်သွားတယ်”လို့ သုံးသပ်ရမှာလား။ “ကျ”သွားတယ်လို့ပြောရမလား။ မီဒီယာ သမားတွေအတွက်တော့ “အဘကျော်”ရန်က လွတ်ပြီလို့ဆိုရမလား။ “အဘကျော်”ကို နေရာရွှေ့ပြီး မီဒီယာသမားတွေကို ကျောသပ်ချွေး သိပ်လိုက်တာများလား။ ဒါမှမဟုတ်နောက်လာတဲ့ “အဘကြည်”က သွားလေသူ “အဘကျော်” ထက်ကဲနေမလား။ တခြားကွဲပြားမှုတော့ မသိပါဘူး။ “အဘကျော်”နဲ့ မတူတာတော့ “အဘကြည်”က “အမေစု” နဲ့ စိမ်းလဲ့ကန်သာမှာ အကြိမ်ကြိမ်ထိတွေဆက်ဆံဖူးသူဖြစ်တယ်။
ဦးအောင်ကြည်။ သူလည်း ဝန်ကြီးဌာန ၂ ခုကိုင်တဲ့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံရတဲ့ စိမ်းလဲ့ကန်သာ“ဆက်ဆံရေးဝန်ကြီး”လည်းဖြစ်တယ်။ (နအဖ) စစ်အစိုးရလက်ထက်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ (၉) ကြိမ်တွေ့ဆုံခဲ့ ဖူးပြီး ဦးသိန်းစိန် ကြံ့ဖွံ့အစိုးရလက်ထက်မှာ (၄) ကြိမ် ထိတွေ့ဆက်ဆံဖူးတယ်။ သူဟာ အစိုးရအဖွဲ့တန်းစီဇယားအမှတ်စဉ်အရဆိုရင် ယခင်ကအမှတ်စဉ်(၁၆) ကနေ ယခုအမှတ်စဉ် (၈)ဦးကျော်ဆန်းနေရာကို ရောက်လာတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်“အထက်တက်သွားတယ်” လို့သုံးသပ်ရမှာလား။ ဦးသိန်းစိန်စကားနဲ့ဆိုရင် ဦးကျော်ဆန်းကို “နောက်ချန်ထားခဲ့”တာမဟုတ်ဘဲ။ “နောက်ကိုပို့လိုက်တာ” လို့ ပြောရ မယ်ထင်ပါတယ်။ ဦးအောင်ကြည်ကိုရော စိမ်းလဲ့ကန်သာ “ဆက်ဆံရေးဝန်ကြီး” တာဝန်ကနေ အနားပေးလိုက်ပြီလား။
နေမြဲအတိုင်းအပြောင်းအလဲ မရှိ၊ ထူးခြားသူတစ်ဦးတော့ရှိပါတယ်။ သူက ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဇော်မင်းဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ ဧရာဝတီမြစ်ဆုံအရေးမှာ “ကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှနောက်မဆုတ်ပါဘူး၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့က ကန့်ကွက်နေလို့နောက်ဆုတ်မှာလားလို့မေးခွန်းတစ်ခုမေးပါတယ်။နောက်မဆုတ်ပါဘူး။ဆက်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်” ဆိုပြီး ကြမ်းခဲ့ ရမ်းခဲ့သူပါ။ သူဟာ အမှတ် (၁) လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအဖြစ် နေမြဲပါပဲ။ ဦးသိန်းစိန်ရဲ့“လေးလေးပင်ပင်စာရင်း”ထဲ ဦးဇော်မင်း မပါဘူးလား။
သမ္မတဦးသိန်းစိန်ဟာ အစိုးရအဖွဲ့ထဲမှာပါတဲ့ (ကာလုံ)အဖွဲ့ဝင်တွေကိုတော့ အခုလို “ပြောင်းလဲတာဝန်ပေး”လို့မရနိုင်ပါဘူး။ အစိုးရအဖွဲ့ထဲက(ကာလုံ)အဖွဲ့ဝင်တွေဆိုတာက တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဆီကနေ စာရင်းပေးလို့ခန့်ထားရသူတွေမဟုတ်လား။ ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ “လေးလေးပင်ပင်စာရင်း”ထဲ (ကာလုံ)အဖွဲ့ဝင်တွေ မပါနိုင်ဘူးလား။ ပါဝင်နေတယ်ဆိုရင် ဦးသိန်းစိန် ဘယ်လိုများ ပြောင်းလဲ မှာပါလိမ့်။
( အယ်ဒီတာ့မှတ်ချက် – တူမောင်ညိုဆောင်းပါးသည် ၂၈ သြဂုတ် ကရေးသားခဲ့သောဆောင်းပါးဖြစ်ပါတယ်)
8 Responses to ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ “အလှည့်” နဲ့“အပြောင်း” (Tu Maung Nyo)
မမ on August 29, 2012 at 8:10 am
ပုံ/ သိန်းစိန် (သမ္မတကြီး)
မောင်ပျာလောင် on August 29, 2012 at 10:05 am
တူမောင်ညို ရယ် အပစ်တင်စောလှကြီလား၊ တစ်ရက်နှစ်ရက်လောက်စောင့်လိုက်ပါဦးလား။ သမတကြီးဘာလုပ်လုပ် မကောင်းမြင်ဝါဒနဲ့မကောင်းတဲ့ရှု့ ထောင့်ကဘဲကြည့်တပ်သလား ? ။ အရင် စာစောင်တွေမှာလည်းဒီလိုပါဘဲ၊ ဘာမှ အကောင်းမြင် ၀ါဒမရှိပါဘူး။ ကျနော်ဆိုလိုရင်းက အပစ်လည်းတွေ့ ရင် ပြောပါ၊ ဒါပေမဲ့ ကောင်းတာတွေကိုလည်း ပိုပြီးကောင်းလာအောင် အပြုသဘောမျိုးလည်း ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။ ဘယ်လို လုပ်ရင်ပိုကောင်းလာမယ်ဆိုတာလည်း ရေးဦးမှပေါ့။ ပြည်သူ လူထု အပေါ်မှာလည်းစေတနာထားပါဦး။ ကြာရင်လူထုချဉ်ပတ်ကြီး ဖြစ်မလာအောင် စေတနာနဲ့ ပြောတာပါ။
mickey on August 30, 2012 at 3:10 am
i agree with mg pyar laung,
this yu mg nyo is lousy guy, mad guy
Lagunn Eain on August 30, 2012 at 10:16 am
I am totally agree with Ko Pyar Laung… He is too much pessimistic…..
Witmoneo on August 29, 2012 at 12:23 pm
Tu Maung Nyo’s positive article. I try to lead my family as UTS’s style but opposition wife is always demanding like DASSK (internal crisis). But we must unitedly build family. THANK WRITER..
kyaw on August 29, 2012 at 9:54 pm
Tu Maung Nyo,May i want to ask to you.Can you do it like that?You are really really opposition man.very bad person .
I'M MYANMAR on August 29, 2012 at 11:36 pm
The sufferer. on August 30, 2012 at 10:35 pm
This guy, Former Minister Kyaw San is the notorious bastard. His Department had intentionally occupied and refuse to give back our nearly 100 years owned land in Tavoy(Dawei),which took without any reason,for their benefit.This land belongs to our great grand father,and legally registered in 1928,which their Ministry,took away. They had their owned Hnin Cinema Hall,but, they discriminate and occupied our land,which is in the corner of U Kyaw Yin & Arzani Road,Anauk Yat. Mr. President, please give back our owned land.This is means for the sake of donation for charity purpose. I believe in you,Mr. President.